उत्तम काप्री बुधबार, फागुन ७, २०७६, १७:१४
काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआइ)को ५४औं वार्षिक साधारणसभा चैतको अन्तिम साता हुँदै छ। तर, महासंघको चुनावी माहोल भने दिनानुदिन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। व्यवसायीहरू विभिन्न समूह बनाएर चुनावी तालमेलमा होमिएका छन्।
किशोर प्रधानले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि महासंघको शक्ति समीकरण कसिलो र रोचक बन्दै गइरहेको छ। ५१औं वार्षिक साधारणसभामा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा गोल्छासँग पराजित भएका प्रधानले फागुन १ गते विराटनगरबाट पुनः वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए।
प्रधानको उम्मेदवारी घोषणा नै महासंघको निर्वाचनमा तरंग ल्याउने गरी भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। त्यति मात्रै नभई प्रधानको उम्मेदवारीसभामा देखिएको व्यवसायीको जमघटले निर्वाचनमा नयाँ ‘ट्विस्ट’ ल्याएको छ। प्रधानको उमेदवारीसभामा दुई पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी र विनोदबहादुर श्रेष्ठसहित निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका सहभागी थिए। मुरारकालाई महासंघको चुनावी खेलाडीको रूपमा हेरिन्छ।
यसका पनि कारण छन्। आफू अध्यक्ष भएपछि विधान नै संशोधन गरेर भवानी राणालाई स्वतः अध्यक्ष उनले नै बनाएका थिए भने गोल्छालाई अध्यक्ष बन्न नदिन रचिएको विधान संशोधनको खेल उनैले टुंग्याइदिएका थिए। यसकारण शेखर चैतपछि स्वतः महासंघको अध्यक्ष बन्दैछन्।
गोल्छालाई अध्यक्ष बन्न रोक्नकै लागि तयार गरिएको विधान संशोधनको खेलपछि अर्को समूहले अहिले प्रधानलाई अघि सारेको छ।
किशोर प्रधानको उम्मेदवारी घोषणा मञ्चमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल सहभागी थिए। वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा उमेदवारी दिने तयारीमा रहेका अञ्जन श्रेष्ठको समेत प्रधानको उम्मेदवारीसभामा उपस्थिति थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने व्यवस्थाकै कारण महासंघको निर्वाचनमा सबैको ध्यान वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा हुने स्वभाविक हो।
विराटनगरमा किशोर प्रधानको उम्मेदवारी घोषणा सभा।
अहिलेको उपाध्यक्ष नै ३ वर्षपछि महासंघको अध्यक्ष हो। बाग्लुङ महोत्सवको कार्यक्रमबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हालका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए। चन्द्रलाई किशोर प्रधानले विराटनगरमा उम्मेदवारी घोषणासभा गर्दै ’काउन्टर’ दिए।
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुवानी माहोल अब झन्डै दुई महिनासम्म रहनेछ। प्रधानको उम्मेदवारीसँगै अहिले महासंघमा स्वतः वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने र ३ वर्षपछि महासंघको नेतृत्व लिने व्यवसायी चन्द्र ढकालको योजनामा धक्का लागेको छ। ढकाल सहजै वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने वातावरण पनि धमिलिएको छ। यसको एउटै कारण हो, स्वतः अध्यक्ष हुने गोल्छा, निर्वतमान अध्यक्ष मुरारका, पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी र विनोद श्रेष्ठजस्ता प्रभावशाली पात्रहरुको सहयोग प्रधानका पक्षमा।
‘सुरुवाती चरणमै किशोर प्रधानको उम्मेदवारीले महासंघको चुनावमा तरंग ल्याएको छ। तरंग आउनु सामान्य हो। यो तरंग अब फाइलनसम्म नै रहन्छ,’ महासंघ सम्बद्ध प्रभावशाली एक व्यवसायी भन्छन्, ‘प्रधानको उम्मेदवारीसँगै आरम्भ भएको तरंग चानचुने होइन। यही तरंगले नै महासंघलाई शुद्धीकरण गर्न सहयोग गर्छ। महासंघ कसैको पनि विर्ता नभएकाले तरंग सृजना गर्न र किशोरलाई जिताउन पनि पाइन्छ।’
महासंघ सधैँ पूर्व अध्यक्ष चण्डी ढकालको चुनावी ‘रोडम्याप’मा चल्दा महासंघको छवि र आन्तरिक गठजोड अस्वस्थ बन्दै गएको दाबी उनको छ। यसअघिका निर्वाचनमा चण्डीले आफूलाई खेलाडीका रूपमा उतार्दै आफूअनुकुल उम्मेदवारका पक्षमा माहोल तयार गर्ने गरेको तथ्य छिपेको छैन। यतिसम्म कि चण्डीले महासंघमा आफ्नो ‘सेटिङ’ तय गर्न कतिपय अवस्थामा ‘लेनदेन’ गरेको आरोप पनि खेप्दै आइरहेका छन्।
तर अहिले महाधिवेशनका सम्मुखमा उत्पन्न तरंगको गणित र प्रकृति विगतको भन्दा फरक छ। यसअघि चण्डीकै अगुवाईमा गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन ‘लबिङ’ भएको थियो तर अहिले स्वयं गोल्छा चण्डीका विपरीत खेमामा उभिएका छन्। त्यसैगरी शेखरलाई नै सघाएका अर्का प्रभावशाली पात्र पशुपति मुरारकाको साथ त झन् किशोरकै पक्षमा देखिएको छ।
‘यस्तो पृष्ठभूमिमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षी व्यवसायी चन्द्र ढकाल कमजोर बन्दै गइरहेको देखिन्छ,' ती व्यवसायी भन्छन्ऽ ‘महासंघका हकमा नयाँ सन्देश दिन पनि व्यवसायीहरू नयाँ गठजोड बनाएर लागिपरेका हुन्।’ महासंघको निर्वाचनको छेको पारेर केही व्यक्तिलाई ललाइफकाई गर्ने र विभिन्न प्रलोभनमा प्रभावित पार्ने काम राम्रो होइन। र यस्तो प्रवृत्ति घातक रहेको निष्कर्ष किशोर समूहको छ।
पूर्वअध्यक्ष मुरारका र वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा पनि बाग्लुङ पुगेका थिए। तर उनीहरू चन्द्र ढकालको उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा सहभागी नभई हेलिकोप्टरबाट राजधानी फर्किए।
विराटनगर घोषणाले उत्पन्न गरेको नयाँ ‘ट्विस्ट’पछि महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि सतहमा दुई खेमा देखिएका छन्। यी दुई खेमाको केन्द्रमा छन् किशोर प्रधान र चन्द्र ढकाल। ढकालले आफ्नै गृहजिज्ला बाग्लुङमा भएको भएको बाग्लुङ महोत्वसमा बोल्दै आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए।
रमाइलो के भयो भने, बाग्लुङ महोत्सव सुरु हुने अघिल्लो दिन आयोजित लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौंबाट महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारका र वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा पनि बाग्लुङ पुगेका थिए। तर उनीहरू चन्द्र ढकालको उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा सहभागी नभई हेलिकोप्टरबाट राजधानी फर्किए। ‘चन्द्र सर आफ्नो उम्मेदवारी घोषणामा मुरारका र गोल्छा पनि सहभागी भइदिउन् भन्ने चाहन्थे तर त्यस्तो भएन,' बाग्लुङ उद्योग वाणिज्य संघसम्बद्ध एक व्यवसायी भन्छन्, ‘पक्कै पनि यसको अर्थ अलग थियो। पर्दाभित्र नयाँ खिचडी पाकिरहेको छ भन्ने हामीले त्यतिबेलै अनुमान गरेका थियौं।’
नभन्दै परिदृश्य त्यस्तै देखियो। आइएमइ ग्रुपका अगुवा चन्द्र ढकालका लागि महासंघ महाधिवेशन झन् पेचिलो बन्दै गएको देखियो। कतिपय व्यवसायीहरुले त चन्द्र अहिले ‘आफैंले खनेको खाडलमा आफैं परेको’ टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
यसको पनि कारण छ। यसको मियो भेटाउन भने अलि समय पहिलाका गतिविधि नियाल्नुपर्ने हुन्छ। महासंघको विधान संसोधनको खेल भइरहेका बेला पूर्वअध्यक्ष मुरारका र भावी अध्यक्ष गोल्छालगायतका प्रभावशाली केही व्यवसायीले चन्द्र ढकाललाई ‘यस्तो खेलबाट बाहिर निस्कन’ पटकपटक आग्रह गरेका थिए। उनीहरूको एउटै आवाज थियो, ‘चण्डीको रोडम्यापमा हिँडेर विधान संसोधनको खेलमा नलाग्नुस्। तपाईं त्यो समूहबाट बाहिरिँदा सहज हुन्छ।’
विधान संशोधन गराउने चण्डीको मुद्दा चन्द्रले त्यागे मुरारका समूहले चुनावमा सघाउने समेत वचन दिएका थिए। तर चन्द्रले यो समूहको कुरा लत्याए। उनी अस्वभाविक रूपमा सृजना भएको विधान संसोधनको चलखेलको केन्द्रको पात्र बन्न चाहे। चन्द्रको यस्तो व्यवहारका कारण महासंघका पूर्वअध्यक्ष र मौजुदा पदाधिकारी रुष्ट भए।
‘यही कारणले नै सतहमा देखिएको पूर्वअध्यक्ष समूहले किशोरलाई अघि बढाउने सोच बनायो,’ अर्का एक व्यवसायी भन्छन्, ‘चन्द्र सरका लागि त्यो अवसर थियो। तर उहाँ आफ्नै घमण्डले अफ्ठेरोमा पर्दै जानुभयो।’
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका चन्द्र ढकाल। महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।
एकातिर पूर्वअध्यक्षको समूह रुष्ट हुँदै जानु र अर्कोतिर किशोर प्रधान स्वयंले समेत परिस्थिति आफू अनुकुल बनाउँदै लैजानुको परिणाम चन्द्र ढकालका लागि भारी पर्दै आयो। तर पनि चन्द्र ढकालले चण्डीकै कुरा सुनेर पछिल्ला दिनसम्म किशोरको उम्मेदवारी निस्तेज पार्न विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाएको उनी निकट स्रोत बताउँछ।
चन्द्रले आफू निकटका कतिपय व्यवासयीहरूसँगको जमघटमा ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन गराएर भए पनि आफूविरुद्धको उम्मेदवारी फिर्ता गराउने’ बताउँदै आएका थिए। तर उनको यो अभ्यास त्यति सान्दर्भिक र फलदायी नहुने व्यवासयीहरूकै विश्लेषण छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत पछिल्ला दिनमा चन्द्रसँग टाढिएको चर्चा व्यावसायी वर्गमा चल्ने गरेको छ। ओलीले सिंगापुर उपचारका क्रममा आफूलाई भेट्न पुगेका चन्द्र ढकाललाई भेट नदिएपछि त झन् यस्तो ‘गसिप’ बाक्लिँदो छ।
यद्यपि, चन्द्र ढकालले चुनावी समीकरण र भोटको अंकगणितलाई आफ्नै हिसाबले लेखाजोखा गरिरहेका छन्। उनले चण्डीको सबैभन्दा बढी पकड रहेको भनिएको जिल्ला–नगरलाई आफ्नो ‘पकेट भोट’ ठानिरहेका छन्। तर जिल्ला नगरमा चण्डीको पकड विस्तारै कमजोर हुँदै गइरहेको समानान्तर विश्लेषण पनि भइरहेको छ। केही महिनाअघि आयोजित ‘त्रिपुरेश्वर भेला’मा चण्डीले ‘शेखरलाई अध्यक्ष भएको ६ महिनामै पदच्यूत गरिदिन्छु’ भन्दै उद्घोष गरे। सोही उद्घोष चन्द्र ढकालका लागि जिल्ला-नगरका हकमा तगारो बन्न लागेको छ।
उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चन्द्र ढकाललाई भेटका लागि समय नदिएपछि व्यवसायीयबीच ‘गसिप’ चलेको छ।
‘के हामीले गोल्छालाई ३ वर्षका लागि मात्रै जिताएको हो त। होइन भने किन चण्डी ढकाल यस्ता गतिविधिको नेतृत्व गरिरहेका छन्? उनले मेरो मान्छे हो भनेर हिँड्दैमा चन्द्र ढकालले भोट पाउँछन् भन्नु नै मुर्खता हो,’ जिल्ला नगरका एक व्यवसायीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘अब चण्डी ढकाल र उनको समूहले गोल्छालाई काम नै गर्न नदिने खेल निस्तेज हुनेछ र महासंघ स्वतः शुद्धीकरण हुनेछ।’
उता, एसोसिएटबाट पनि आफूलाई राम्रो मत आउने चन्द्र ढकाल समूहको विश्लेषण छ। जानकारहरूका अनुसार एसोसिएटका हकमा भने चन्द्रको अनुमान सही निस्कन सक्छ। तर सिंगो महासंघ निर्वाचनमा भोटको अंकगणित प्रभावित पार्न भने एसोसिएटको मत पर्याप्त नहुन सक्छ। किन भने एसोसिएटमा मुरारका र अञ्जन श्रेष्ठलाई पनि उत्तिकै प्रभाव भएका व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छ।
किशोर किन कमजोर छैनन्?
तीन पूर्वअध्यक्षहरूले अघि सारेका उम्मेदवार किशोर प्रधान समूहको पनि आफ्नै विश्लेषण छ। किशोर प्रधान ५१औं वार्षिक साधारणसभामा अर्थात् नेतृत्व चयनको निर्वाचनमा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा गोल्छासँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तर, उनलाई सहयोग गर्नेमा पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी मात्रै थिए। अधिकांश पूर्वअध्यक्ष र अहिले महासंघको नेतृत्वमा रहेकी भवानी राणाको समेत गोल्छालाई नै सहयोग थियो। तर, सबै खेलाडीका सामु किशोर एक्लो बृहस्पतिका रूपमा निर्वाचनको मैदानमा थिए। तर, उनले पाएको मत सबैलाई आश्चर्यचकित बनाउने नै थियो।
किशोर प्रधानले यसअघि महासंघको निर्वाचनमा ३६ दशमलव ७ प्रतिशत भोट ल्याएका थिए भने गोल्छाले ६३ दशमलव ३ प्रतिशत मत ल्याएर विजयी भएका थिए। किशोरले ल्याएको सबै मत उनको एक्लो प्रयासबाट नै सम्भव भएको थियो। तर, अहिले उनलाई भावी अध्यक्ष गोल्छा, पूर्वअध्यक्ष मुरारका, जोशी र श्रेष्ठको पनि साथ छ।
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवार किशोर श्रेष्ठ। महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।
त्यतिबेला सबैको साथ र सहयोग पाएका गोल्छाले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाउने आँकलन गरिएको थियो। तर, प्रधानले उनीहरूको आँकलन गलत साबित गरिदिए र मत बढाए। यतिसम्म कि प्रधानले वस्तुगतमा एक्लै भिड्दा पनि गोल्छाको भन्दा बढी भोट ल्याएका थिए भने जिल्ला-नगरमा पनि मात्र १ प्रशितको हाराहारीमा पछि परेका थिए।
प्रधान समूहका एक प्रभावशाली व्यवसयीले भने, ‘हेरिराख्नुस्, यसपटक महासंघमा उल्टो गंगा बग्छ।’
प्रधान यसअघि सबैभन्दा कमजोर देखिएको एसोसिएटमा थिए। त्यतिबेला प्रधानको समूहले एसोसिएटतर्फ उपाध्यक्षमा उम्मेदवार समेत भेट्टाएन। यसकारण एसोसिएटबाटै चन्द्र ढकाल सर्वसम्मत उपाध्यक्ष बनेका थिए। तर, अहिले प्रधानको टिममा लागेकाहरू चन्द्र ढकाललको भन्दा १ प्रतिशत भएपनि बढी भोट ल्याएर देखाइदिने दाबी गरिरहेका छन्।
यसपटक प्रधानले एसोसिएटमा भोट बढाउने आधार भनेकै अञ्जन श्रेष्ठ, गोल्छा र मुरारकाको साथ हो।
महासंघको निर्वाचनमा जिल्ला-नगर, वस्तुगत र एसोसिएटतर्फको कुल मतलाई एक सय प्रतिशत मानेर त्यसैको अनुपातमा नतिजा निकाल्ने प्रणाली छ। जसमा जिल्ला-नगरको भार ५० प्रतिशत, वस्तुगतको २० प्रतिशत र एसोसिएटको ३० प्रतिशत रहन्छ। जिल्ला-नगरमा १ सय ८, एसोसिएटमा ९ सय ५० को हाराहारी र वस्तुगतमा १ सयको हाराहारीमा मत छन्।
अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा प्रधानले वस्तुगततर्फ १० दशमलव ४१ प्रतिशत भोट पाएका थिए। तर, उनका प्रतिस्पर्धी गोल्छाले भने अधिकांश पूर्वअध्यक्षको सहयोग पाउँदा पनि ९ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्रै भोट पाएका थिए। वस्तुगततर्फ अझै गोल्छा, मुरारका, विनोद श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी र अञ्जानको समेत सहयोग हुने भएपछि यसपटक प्रधानको भोट आधार बलियो भएको छ।
महासंघका भावी अध्यक्ष शेखर गोल्छा। महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।
यसैगरी, प्रधानले गोल्छासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा जिल्ला-नगर तर्फबाट २० दशमलव ३६ प्रतिशत भोट ल्याएका थिए। जिल्ला-नगरमा सबैभन्दा राम्रो पकड भएका चण्डी ढकालको समेत सहयोग रहेका गोल्छाले २९ दशमलव ६१ प्रतिशत भोट ल्याएका थिए। अब यो वृत्तको भोट प्रधान र चन्द्र ढकालका लागि आधा–आधा विभाजन हुने आँकलन गरिएको छ। वस्तुगत र जिल्ला नगर गरी ४२ प्रतिशतको हाराहारीमा भोट ल्याउने आफूहरूको लक्ष्य रहेको प्रधान समूहले दाबी गरेको छ।
अघिल्लो पटक एसोसिएटको भोट नै प्रधानको हारका लागि प्रमुख कारण बनेको थियो। तर, अहिले प्रधानको टिममा खुलेर लागेकाहरू एसोसिएटतर्फ एक भोट भए पनि प्रधानको बढी हुने ठोकुवा गर्छन्। यसअघि प्रधानले एसोसिएटतर्फ ५ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै भोट ल्याएका थिए भने उनका प्रतिस्पर्धी गोल्छाले २४ दशमलव १० प्रतिशत भोट ल्याएका थिए।
‘अब त्यस्तो हुँदैन, हामी सबै सेक्टरमा बलिया छौं,' प्रधान समूहका एक प्रभावशाली व्यवसयीले भने, ‘हेरिराख्नुस्, यसपटक महासंघमा उल्टो गंगा बग्छ।’
विमानस्थलमा विकासको मनपरी नमूना : १८ महिनाअघि मार्बलमाथि कार्पेट, अहिले कार्पेट हटाएर मार्बलमाथि टायल
सवा ४ अर्बमा मर्मत भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा पानी रसायो
अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माण गर्न दिएको ९६ रोपनी जग्गा हवाई एकेडेमीकै नाममा फिर्ता हुँदै